3D madani ah, samee isku-xirnaan (cashar 3) - Geofumadas
3D madani ah, samee iskudubarid (cashar 3)
Mee, 2009 AutoCAD-AutoDesk, Engineering, topografia
Laba casharadood oo hore ayaan aragney sida loo soo dejiyo dhibco y u habee. Hadda waxaan rabnaa in aan isku dhejinno qodobbada loo calaamadiyay saldhigyada.
Sidaa darted, waxaan u adeegsan karnaa qawaaniinta qoraalka ah waxaanan isticmaalnaa amarka qashinka ee noodhka. Waxaan ka baxeynaa saldhigga bilawga illaa finalka.
Abuuri isku dhafid
Tan waxaa loola jeedaa "isku xirnaanta / abuurida isku xirka"
markaa waxaan taabannaa qoryaha iyo waxaan helaynaa guddi in hadda aan ka badneyn magaca magaca isku-xidhka. Waxaan u wici doonaa "Mel Zelaya Street"
Oo halkaas waxaa jooga saaxiibadayda.
Ah, waxaad doonaysaa inaad abuurto dusha sare?
Right click dushiisa, cusub iyo si fiican waxaad u wici kartaa "Surface Hugo Chavez"
Hadda waxaad guji midigta "qeexida / dhibcaha kooxaha" waxaanan dhihi karnaa dhammaan qodobadaasi waa kuwa ka sameysan dusha sare.
Waa hagaag, waxaan sii wadi doonaa ka dib markaan ku wareerayo suugaanta. Tijaabi intaad abuurayso ereyada ka soo horjeeda iyo dusha dhulka la abuuray.
Post Previous«Previous 3D madani, naqshad jidka, cashar 2
Post Next Ka dhigista fiidiyowga Google EarthNext »
13 Jawaab "3D madani ah, waxay abuuraan isku xirnaan (cashar 3)"
Jorge Casteleiro isagu wuxuu leeyahay:
saaxiibo wanaagsan ayaad iigu sheegi kartaa sida loo sameeyo qaab joogto ah iyada oo loo marayo isku xirka horay loo dhigey
Armando Ramirez isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u baahanahay in aan sameeyo isku-xir (raaci polyvinada autocad 2014
ma ogtahay sida ay tahay?
Alex ventura isagu wuxuu leeyahay:
isku-xidhka ayaa ku soo baxaya inji, sida aan u sameeyo qayga miisaska ama masaafada dhabta ah
carlox isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa in aan iga caawiyo in aan isku rogo isku xirnaanta qaabka wax lagu dhejiyo ee 3d ...... 3D miyuu igu guuleystey ......
Waad ku mahadsan tahay qof kasta oo i caawin kara dhibaatadan.
mario alexis isagu wuxuu leeyahay:
Hambalyo saaxiibo, u mahad naqa kaalintaan aadka u xiiso badan, sii wado, hambalyo, qaado daryeel, haddii fiditaanka wadadu uu aad u dheer yahay, waan jari karaa qaybahaan
Markaad sameysid iskuxirid, tusaale ahaan, waxaad ka sameysan kartaa polyvin, waxaadna aragtaa guddi aad ku qorto guryaha, sanduuqa saddexaad loo yaqaan
“Saldhigga laga bilaabo” wuxuu kuu oggolaanayaa inaad dhigto barta bilowga
Hada, sidee bay u fiican tahay?
Waa markii iigu horeysay ee aan ku faraxsanahay inaan arko boggan.
Tani waa mid aad u xiiso badan ..
Waxaan haystaa su'aal ... sida loo badalo masaafada aan rabo sidan
0 + 123.25 .... laakiin ii soo jiid sidan. 1 + 23.25 oo aanan helin habka loo hagaajiyo ... ii sheeg ... salaan kariimka ....
andres isagu wuxuu leeyahay:
1 markii aan arko barta ayaan ku arkay inay aad u xiiso badan tahay waxa ay ku hayaan,
Waxaan jeclaan lahaa in aan safaro yar yar lahaa, iyo hawlaha dugsiyadu yaryahay wiilasha.
Laakiin waan arki doonaa.
VICTOR isagu wuxuu leeyahay:
salaan saaxiibo egeomates, mawduucyada ay yihiin kuwo aad u xiiso badan, waxaan ka caawin kartaa in la abuuro qaybo cross iyo xisaabinta mugga, ka dibna la abuuro go'yaal mashruuca siman oo taagan halkii kiiloomitir iyo meel sarreeya mashruuca calaamad, dhul dabiici ah, height jarida aragti Walxaha iyo abscissa.
Waxaan rajeynayaa inaad i caawin karto, aad ayaad u mahadsantihiin
Hi Alfonso, mowduuc xiisa leh, waxaan doonayay inaan ka hadlo. Waqti ayaan qaadan doonaa, markaan ka soo laabto safarkaygii… waxaan rajeynayaa inaysan soo daaheyn.
Alfonso isagu wuxuu leeyahay:
Saaxiibada geofumadas ... Waa wax aad u fiican oo adiga kugu leh barnaamijkan sida wanaagsan oo ballaaran sida waa 3d madani ah. Anigu waxaan ahay injineer madani ah, waxaanan jeclaan lahaa inaad fadlan iga caawiso maaddo gaar ah sida xisaabinta xajmiga u dhexeeya laba dusha laakiin ku xaddidnaa leydi ... waa, qaybta dhulka ... iyo haddii miisaska la soo bandhigi karo xisaabinta xajmiga qaybaha aad ka arki karto xariiqyada qeexaya dhulalka nautal iyo xariiqda ay go'aanka gaadhay .... Waad ku mahadsantahay horeyna waan sugayaa jawaabtaada dhaqso ...
Hayso ilaa ... Salaan